Wararka - CHKBiotech waxay si guul leh u soo saartay xirmo lagu ogaanayo noocyada cusub ee coronavirus-ka
New Coronavirus Variant Strain 501Y-V2 ee Koonfur Afrika
Bishii Diseembar 18, 2020, Koonfur Afrika waxay ogaatay a 501Y-V2 mutant oo ah coronavirus cusub. Hadda mutant-ka Koonfur Afrika wuxuu ku faafay in ka badan 20 dal. Tijaabooyinku waxay muujiyeen in korka cusub ee 'Corona-virus Mutant' ay qaadi karaan noocyo kale oo cusub oo ah 'Coronavirus virus' kala duwan oo ah K417N / T, E484K iyo N501Y oo yareyn kara awoodda dhexdhexaadnimada ee tallaalka ku-tallaalidda plasma ee difaaca jirka. Si kastaba ha noqotee, marka la barbardhigo hiddo-wadaha tixraaca Wuh01 (nambarka isku xigta MN908947), 501Y.V2 ee isku-xidhka hidde-wadaha mutantiga Koonfur Afrika wuxuu leeyahay 23 nooc oo nukleotide ah. Waxay leedahay isla beddelid N501Y ah nooca 'subantty B.1.1.7' ee Ingiriiska, laakiin weli waxay ku jirtaa isbeddello ku dhaca laba goobood oo muhiim ah E484K iyo K417N oo ah borotiinka S oo leh saamayn muhiim ah oo ku saabsan awoodda fayrasku ku qaadsiin karo.
Fayraska cusub ee 'Coronavirus' waa Hal Fidsan oo RNA Virus ah, kaas oo isbeddelada Genome ay aad u badan yihiin. Ogaanshaha bartilmaameedka keliya ayaa si fudud u horseedi kara in la baaro baaritaanka shaybaarrada culeyska fayrasku ku yar yahay iyo noocyada fayraska ee is beddelay. Qiyaasta dib-u-baadhitaanka ee keliya ee keliya ee lagu ogaanayo bartilmaameedka, waxay gaari kartaa in ka badan 10%, taas oo kordhin karta culeyska shaqada iyo sii dheereynta waqtiga cudurka. Ogaanshaha bartilmaameedyo badan iyo xaqiijinta wadajirka ah ee bartilmaameed kasta waxay kordhin kartaa heerka ogaanshaha waxayna sahlaysaa ogaanshaha hore.
Jaantus 1. Jaantuska jaantuska ee habka cudurka Coronavirus-ka cusub
New Coronavirus Mutant B.1.1.7 oo reer Britain ah
Bishii Diseembar 26th, 2020, warqaddii ugu horreysay ee cilmiyaysan ee B.1.1.7 Strain ayaa lagu daabacay khadka tooska ah. Machadka Jaamacadda Nadaafadda ee London UK iyo Cudurrada Tropical, waxay xaqiijiyeen in B.1.1.7 Cadaadisku ka awood badan yahay inuu ku faafo noocyada kale, taas oo ka badneyd 56% (95% CI 50-74%). Sababtoo ah dhibaatadan cusub ee is bedeshay waxay leedahay awood gudbinta oo muuqata, way adkaatay in la xakameeyo COVID-19. Maalintii ku xigtay, Jaamacadda Birmingham ee Boqortooyada Midowday waxay soo daabacday maqaal ku saabsan MedRxiv. Daraasadu waxay ogaatay in tirada ORF1ab iyo nuqullada hiddo-wadaha ee fayraska N ee bukaanada qaba cudurka B.1.1.7 mutant strain (S-gene dropout) ay si aad ah u kordheen; dhacdadan ayaa lala socday dadka. Maqaalkani wuxuu tilmaamayaa in bukaanada uu ku dhacay mutant B.1.1.7 ee Britain ay leeyihiin culeys aad u sareeya oo fayras ah, sidaa darteed isbadalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu cuduro badan keeno.
Jaantus 2: Iskuxirka hidde-wadaha ee kujira coronavirus mutant strain B.1.1.7 ee Ingiriiska
Jaantus 3. Isbadal N501Y ayaa ka dhacay Ingiriiska iyo Koonfur Afrika labadaba Kaladuwanaansho
Qalabka baaritaanka ee noocyada cusub ee Coronavirus
Shirkadda Chuangkun Biotech Inc. ayaa si guul leh u soo saartay qalab lagu ogaanayo B.1.1.7 iyo 501Y-V2 noocyo cusub oo coronavirus ah.
Faa'iidooyinka sheygan: xasaasiyad sarreysa ， isla mar ahaantaana la ogaado 4 bartilmaameed, oo daboolaya aagagga ugu weyn ee isku-beddelka B1.1.7 feker mutant iyo 501Y.V2 South African mutant strain. Qalabkani wuxuu isku mar ogaan karaa N501Y, HV69-70del, goobaha is-beddelka E484K iyo hiddo-wadaha cusub ee coronavirus S; Tijaabinta dhakhsaha leh: waxay qaadataa oo keliya 1 saac 30 daqiiqo laga bilaabo ururinta muunadda iyo natiijada
Jaantus 4. Soo ogaanshaha Qalooca Kordhinta COVID-19 Britain
Jaantus 5. Ogaanshaha COVID-19 Qalooca Kordhinta Noocyada Koonfur Afrika
Jaantus 6. Nooca duurjoogta ah ee qalooca kordhinta coronavirus-ka cusub
Ma cadda sida is-beddelladani ugu urursan yihiin saamaynta muddada-dheer ee cusub ee cudurka faafa ee COVID-19. Laakiin tani waxay na xusuusinaysaa in isbeddelladani ay saameyn ku yeelan karaan waxtarka difaaca dabiiciga ah iyo difaac uu keeno tallaalku. Waxay sidoo kale ina xusuusinaysaa inaan u baahannahay inaan si joogto ah ula soconno coronavirus-ka cusub muddo dheer oo aan cusboonaysiinno tallaalka COVID-19 si wax looga qabto isbeddellada cusub ee coronavirus.